Umshini Wokugcwalisa Umshini Okuzenzakalelayo - Abakhiqizi Bomshini Wokugcwalisa Ngokuzenzakalela baseChina, Abahlinzeki
Umshini wokugcwalisa i-powder ozenzakalelayo onesisindo sokuhambisa
Umshini wokugcwalisa impuphu umshini wokugcwalisa impuphu, ofanele ukugcwaliswa okuningana kwezinto ze-powdery nezimbumbulu ezifana nezibulala-zinambuzane, izidakamizwa zezilwane, ama-premixes, izithasiselo, ubisi oluyimpuphu, isitashi, ama-condiments, amalungiselelo enzyme, nokuphakelayo.
Umshini wokugcwalisa uketshezi othomathikhi wenziwe ngendlela ethuthukisiwe ngokuya ngemikhiqizo yochungechunge lomshini wokugcwalisa, futhi eminye imisebenzi ingeziwe. Yenza umkhiqizo ube lula kakhulu futhi ube lula ekusetshenzisweni, iphutha lokunemba, ukulungiswa kokufakwa, ukuhlanzwa kwemishini, ukugcinwa, njll. Umshini wokugcwalisa amanzi othomathikhi ungagcwalisa uketshezi oluhlukile lwe-viscosity ephezulu. Umshini unomklamo ohlangene futhi ozwakalayo, ukubukeka okulula nokuhle, nokulungiswa okulula kwevolumu yokugcwalisa.
Lo ngomunye wokunamathisela umshini wokugcwalisa othomathikhi okhokhelwayo, okokugcwalisa ukudla, isiphuzo, umuthi, imboni yezimonyo, okubhaliwe okunamathelayo, okunganamatheli, okulimazayo nokungonakalisi, amagwebu nonogwebu. Njengamafutha adliwayo, izinto zokugcoba, ukumboza, uyinki, upende, ama-ejenti elapha, izinto zokunamathisela, izinyibilikisi eziphilayo, sizoklama ifilitha yesixazululo ekhethekile, nomshini wokugcwalisa, ungangeza iyunithi yokulinganisa, ngeyunithi yezindaba, ngokulayisha okuzenzakalelayo nokulayishwa.